E wepụtala Qt Onye Okike 4.12 na ndị a bụ akụkọ ya | Site na Linux
Mwepụta nke ụdị ọhụrụ nke gburugburu mmepe agbakwunyere "Qt Onye Okike 4.12" nke bu Ezubere iji wuo ngwa cross-platform site na iji Qt library.
1 Kedu ihe ọhụrụ na Qt Onye Okike 4.12?
2 Etu esi wunye Qt Creator 4.2 na Linux?
Kedu ihe ọhụrụ na Qt Onye Okike 4.12?
Na ọhụrụ version, na ike ịchọgharị na chọọ Qt Ahịa katalọgụ ụlọ ahịa nke jikọtara ọnụ, site na nke a na-ekesa modulu dị iche iche, ọba akwụkwọ, ngwa mgbakwunye, wijetị, na ngwaọrụ ndị nrụpụta. Tonweta na katalọgụ ahụ bụ na ibe "Ahịa" ọhụụ, nke emebere dịka nke ibe maka ihe nchọgharị na ntuziaka.
Gbakwunye ntọala iji họrọ ụdị nke njedebe nke ahịrị (Windows / Unix), enwere ike itinye ya na ụwa niile yana yana faịlụ ndị mmadụ.
Ọ na-enyekwa nkwado maka nhazi usoro nke ụkpụrụ na iji akara Markdown na mmapụta ozi, ma ọ bụrụ na ọ na-akwado ihe nkesa ọkwọ ụgbọala dabere na LSP (Asụsụ Server Protocol).
na Ngwakọta ngwakọta CMake emeela nkwado nkwado_group ka mma yana nhọrọ ị gbakwunye ụzọ ọchụchọ n'ọbá akwụkwọ na LD_LIBRARY_PATH. Mgbe ị na-eji nsụgharị ọhụrụ nke CMake na-eziga akwụkwọ na usoro QtHelp, a na-edebanye aha akwụkwọ a na akpaghị aka na Qt Onye Okike.
Se megharia gburugburu ebe obibi iji mepee ngwa maka ikpo okwu gam akporo, Na mgbakwunye, ikike ịdebanye aha ọtụtụ nsụgharị nke gam akporo NDK na Qt Onye Okike n'otu oge ahụ agbakwunyere, yana njikọ na-esote nke ụdị achọrọ na ọkwa ọrụ ahụ. Agbakwunyere nkwado maka gam akporo 11 API (API larịị 30).
Agbanweela maka sistemụ ụlọ Qbs agbanweela iji jiri nrụnye Qbs nke mpụga, kama ijikọ na ọbá akwụkwọ Qbs ozugbo.
A na-emezi usoro koodu QML na parser maka mgbanwe na ụdị nke Qt 5.15 n'ọdịnihu.
Mbadamba "Symbols" pụtara na nchịkọta akụkọ nchịkọta koodu na nchịkọta nke akara ndị ejiri na akwụkwọ ahụ, yiri otu ọrụ na Locator.
Agbakwunyere ọtụtụ nhọrọ ọhụrụ metụtara nhazi ọrụ, dị ka ikike ịkọwapụta ntọala gburugburu ebe oru ngo.
Agbakwunyere nhọrọ iji budata ma wụnye ngwaọrụ mmepe gam akporo niile dị mkpa.
Etu esi wunye Qt Creator 4.2 na Linux?
Ndị niile nwere mmasị ịnwale QT onye okike na sistemụ ha kwesịrị ịma nke ahụ ọtụtụ Linux distros ga-achọta ngwugwu n'ime nchekwa nke ndị a.
Ọ bụ ezie na mmelite ngwugwu n'ozuzu na-ewe ụbọchị ole na ole iji ruo ebe a na-edebe ego, ọ ka mma ibudata nrụnye ahụ site na peeji nke QT ebe ị nwere ike ịnweta nsụgharị ahụ n'efu ma ọ bụ maka ndị chọrọ ịzụta ụdị azụmahịa (yana ndị ọzọ atụmatụ) nwere ike mee ya na peeji a.
Ugbu a maka ndị bụ Arch Linux, Manjaro, Arco Linux na ndị ọrụ distros ndị Arch Linux ndị ọzọ ha nwere ike iwunye ngwugwu ahụ ozugbo site na ebe nchekwa dị ka ụdị ọhụụ nke onye okike QT dị ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Emeelarị Qt Onye Okike 4.12 ma ndị a bụ akụkọ ya
Manjaro Linux 20.0 bịarutere Kernel 5.6, Pacman 9.4 na ndị ọzọ